हिमाल खबरपत्रिका | अब देवता फिर्ता अभियान
पाटन म्यूजियममा प्रदर्शित जर्मनीबाट फर्किएको धुलिखेलको उमामहेश्वर ।
नेपालमण्डलको मूर्ति पूजाले यहाँको जीवन्त संस्कृति (लिभिङ कल्चर) प्रतिबिम्बित गर्दछ । कुनै मूर्ति लोप हुँदा स्थानीय नागरिकको मस्तिष्क मात्र खल्बलिने होइन, पूरै समुदायको मनोबल गिर्दछ । मूर्तिसँग सम्बन्धित पूजाआजा, जात्रा तथा अन्य पर्वहरू पनि सेलाउँदै जान्छन् । त्यसैले पनि ‘इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज’ लाई बचाइराख्न ‘ट्यान्जिबल हेरिटेज’ को संरक्षण या पुनस्र्थापन गर्नुपर्दछ । र, संसारभर छरिएका हाम्रा देवदेवीलाई फेरि आफ्नो थलोमा फिर्ता ल्याउन सशक्त अभियानको खाँचो छ ।
हामीलाई थाहा भइसक्यो– विदेशी ‘आर्ट कलेक्टर’ वा म्यूजियमलाई ‘तिमीसँग नेपालबाट चोरिएको मूर्ति छ है’ भनेर थाहा दिइँदा उनीहरू फिर्ता पठाउन सजिलै राजी हुन्छन् । १८ वर्ष अगाडि बर्लिनको इन्डिश कुन्स्ट् म्यूजियमबाट धुलिखेल वः टोलबाट सन् १९८२ मा चोरिएको कैलाश पर्वतमा विराजमान उमामहेश्वर यसैगरी फिर्ता गरियो, जुन अहिले पाटन म्यूजियममा राखिएको छ (हे. तस्वीर) । त्यस्तै सन् १९९९ मा अमेरिकाका एक कलेक्टरले चार वटा मूर्ति फर्काए, कामनपा भिन्छे बहाःको शाक्यमुनि, कामनपा ह्युमत टोलको गरुडासन विष्णु, पनौती त्रिवेणीघाटको सूर्य र फर्पिङको वीणा धारिणी सरस्वतीको शिर ।
आजको चुनौती भनेको फर्केका मूर्तिहरूको रेखदेख तथा सुरक्षा भन्दा पनि तिनलाई कसरी आ–आफ्नो परम्परागत थलोमा फिर्ता गर्ने भन्ने हो । फर्केर आएका मूर्तिहरुलाई सुरक्षाका लागि त साविक जस्तै छाउनी म्यूजियममा राखे भइहाल्यो । तर, मूर्तिलाई आफ्नै मन्दिर, खोपा, गर्भगृह वा स्तूपमा फर्काउन चुनौतीहरू भने छन् । चोरी भएका, संसार घुमेर फर्केका आफ्ना देवताहरुलाई समुदायका नागरिकहरू फिर्ता लेराउन चाहँदैनन् पनि । किन त ? जवाफ आउँछ, “फेरि चोरी भयो भने कसले जिम्मेवारी लिने ?”
नेपालमण्डलको संस्कृति जोगाइराख्न यहाँको सार्वजनिक क्षेत्र, मठमन्दिर, बहाः चोक, आगम, पोखरी, पाटीपौवा सबैको संरक्षण र परेमा पुनःनिर्माण हुनुपर्दछ । यस्तै विदेशिएका भगवानलाई मुलुक फिर्ता मात्र होइन, आफ्नै ऐतिहासिक स्थानमा फर्काउनु हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दायित्व हो । यसका लागि फिर्ता आएका मूर्तिलाई टोल–चोकमा सुरक्षित राख्ने उपाय पनि पहिल्याउनु पर्‍यो । तर, आजसम्म यतातर्फ कसरत भएको देखिंदैन ।
मैले दुई दशक अगाडि धुलिखेल गएर स्थानीयवासीलाई लैनसिंह बाङ्देलको किताब देखाएको थिएँ, जसमा त्यहाँको चोकमै अवस्थित उमामहेश्वरको तस्वीर थियो । त्यसबेला स्थानीयवासी ७५ वर्षीया नानीमाया निकै भावुक भएको सम्झन्छु, तर मूर्ति झण्डै दुई दशकअघि नेपाल आएर पनि धुलिखेल भने फर्केन ।
अब नेपाली सोच, सीप र साधन लगाएर फर्केको मूर्तिको सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने वेला आएको छ र धुलिखेल उमामहेश्वरलाई नै उदाहरण बनाउने गरी काम अघि बढाउनु छ । पहिलो कुरा यस मूर्तिबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावशाली सूचना अभियान चलाउनुपर्छ, ताकि कुनै पनि ‘कलेक्टर’ वा म्यूजियमले फेरि चोरी भइहालेमा किन्ने आँट नगरुन् । यत्तिले नै मूर्तिलाई धेरै सुरक्षा दिन्छ, किनकि यसबाट मूर्तिको बजार मूल्य स्वात्तै घट्नेछ ।
यसको अर्थ वः टोलका स्थानीयवासीले उमामहेश्वरलाई गर्व र भावुकताका साथ भिœयाउने मात्र होइन, खुला स्थानमा रहने यस मूर्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने हो । मूर्तिलाई पुरानो स्थानमा राख्दा ‘एङ्कर’ गर्न सकिन्छ, नदेखिने गरी सिमेन्ट, स्टिल वा अरु माध्यमको प्रयोग गरी । परापूर्वकालमा मूर्ति चोरी गर्ने कुरा कसैले चिताउँछ भन्ने कल्पना समेत गरिंदैनथ्यो, त्यसैले मूर्तिलाई अंकुश नलगाई पदस्थापन गरिन्थ्यो । आज भने अंकुश चाहिने नै भयो ।
उमामहेश्वर मूर्ति वरिपरिको चोक क्षेत्रलाई रातको समयमा बिजुली बत्तीले निरन्तर झलमल्ल राख्नुपर्छ । पूजाआजा नहुने वेला कुनै खालको अलार्म राख्न सकिन्छ, ‘मूभमेन्ट’ मा आधारित वा लेसरविम्सहितको सेन्सर प्रयोग गरिकन । कसैले मूर्तिमा हात लगायो कि अलार्म बजिहाल्ने । मूर्ति रहेको ठाउँलाई सीसीटिभी क्यामराद्वारा टेपको व्यवस्था हुनुपर्छ ताकि सबै आवतजावत रेकर्ड होस् । यस्ता मूर्ति जोगाउन धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
धुलिखेल नगरपालिकाले संरक्षणविद्देखि वैज्ञानिकसम्मको सहायतामा उमामहेश्वरलाई वः टोलमा फर्काउने हो भने त्यसबाट धुलिखेलवासी मात्र नभएर मुलुकभरिका समुदाय उत्साहित हुनेछन् । यसले नेपालका मूर्तिमा आँखा गाड्ने चोर र चण्डालहरुलाई निरुत्साहित गर्नेछ । र, मूर्ति फिर्ता अभियानलाई ऊर्जाका साथ अगाडि लैजान सकिनेछ ।
लैनसिंह बाङ्देलले तीन दशक अगाडि ‘स्टोलन इमेजेज् अफ नेपाल’ मा लेखेका थिए— ‘आश गरौं कुनै दिन यी चोरी भएका मूर्तिहरु आ–आफ्ना मन्दिर÷पीठमा फर्काइनेछन् ।’ स्वर्गीय बाङ्देलको कामनालाई वास्तविकतामा ढाल्नु तपाईं हाम्रो कर्तव्य हुन आयो ।